राष्ट्रियसभा उपचुनावमा कसलाई भोट हाल्ने ? राप्रपाले गर्यो यस्तो निर्णय — Imandarmedia.com
राष्ट्रियसभा उपचुनावमा कसलाई भोट हाल्ने ? राप्रपाले गर्यो यस्तो निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा उपचुनावमा राप्रपाले नेकपा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई समर्थन गर्ने भएका छन् । शीर्ष नेताहरुबीच शनिबार भएको छलफलमा अध्ष्क्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभा उपचुनावमा सहयोग मागेको जानकारी गराएका थिए ।